Home > NEWS > Vaovaon'ny indostria > Mila mampiasa inona ny kojakojam-pitaovana fanaka ao amin'ny birao?
Fitaovana fitaovana plastikadia matetika ampiasaina amin'ny fiainana, fanaka sasany no hampiasaina, fa mitana andraikitra lehibe ihany koa, ny fanaka ao amin'ny birao dia manondro ny fanaka sahaza ho an'ny birao, amin'ny fametrahana sy famokarana mbola mila fanohanana kojakoja, avy eo mila ampiasaina ny kojakoja fanaka birao. inona?
Ny zava-dehibe indrindra amin'ny kojakojam-pitaovana fanaka birao dia ny fifandraisana. Ity vokatra ity dia ampiasaina amin'ny fampifandraisana ny fototry ny fanaka. Mazava ho azy, ny kalitaon'ny vokatra dia avo dia avo koa, izay manana fifandraisana lehibe amin'ny fampiasana taty aoriana.
Raha ny marina, misy kojakoja ilaina amin'ny fanaka dia ny hidin-trano sy ny kofehy, ny hidiny ary ny famarana tsy mila ahy hampahafantatra azy, ilaina amin'ny fanaka io, eo amin'ny tsena miaraka amin'ny hidy elektronika sy hidim-bidy izao ny hidin-trano, misy maro karazan-tànana, azonao atao ny misafidy mifanaraka amin'ny zavatra takiny.
Ny kojakoja momba ny fanaka ao amin'ny birao dia misy solosaina, ao anaty vatasarihana no filàna mikorisa, ary amin'ny solosaina amin'ny ankapobeny dia vita amin'ny plastika, amin'ny kalitao raha mbola tsy tena ampiasaintsika ny kalitao dia tsy hanana olana lehibe toy izany.
Ao amin'ny fanaka birao dia miorina amin'ny filàna mijoro sy castor, ireo vokatra ireo dia mety hanana ny vokatry ny raikitra, napetraka tao amin'ny efitrano koa tsy hiseho vokany simba, satria ny fizotry ny vokatra vokatra birao dia fohy ihany koa tsy, fa rehefa isika misafidy marika tsara amin'ny kalitaon'ny tongotra fa tena tsara koa, ary ny karazana soavaly dia namboarina manokana sy novelomina, miloko be ho an'ny orinasa.
Fanasokajiana ny kojakojam-pitaovana fanaka birao:
Araka ny fanasokajiana ara-materialy:firaka zinc, firaka aliminioma, vy, plastika, vy vy, PVC, ABS, varahina, nylon, sns
Araka ny fiasan'ny fanasokajiana:Fitaovana fanaka fananganana: toy ny firafitry ny latabatra dite fitaratra, ny tongony vy amin'ny latabatra boribory sns
Fitaovana fanaka miasa:raha mitaingina soavaly hanoritana, fametahana, singa miisa 3 ao anaty iray, dian-tongotra, takelaka misy sosona dia mitazona fotoana fohy
Fitaovana fanaka haingon-trano:toy ny sisin'ny alimo, pendant vy, tantana vy sy ny sisa
Ny kojakoja momba ny fanaka ao amin'ny birao dia misy koa ny visy, visy hazo, savily, tantanana, solosaina, pin diaphragm, kojakoja crane, fantsika, milina lohateny, masinina mihodina, masinina famindrana, metaly metaly, endriny vy, tantana vy, kodiarana, kodiarana, ziper, tsorakazo pneumatika, loharano, milina, fametahana fanaka, vatasarihana, lalamby fitarihana, vy, harona fisarihana, bara mihantona, milentika, sobika, mitifitra jiro, takelaka fisorohana, lovia antsy sy fork, condole hang, tsanganana maro-be, ny vatan'ny kabinetra mpanambatra.
Amin'izao fotoana izao, ny fanaka fanaka fitaovana dia manintona kokoa ny mpanjifa, ny orinasa fanaka tsirairay dia tokony hahatakatra ny fironana amin'ny tsena, hanararaotra ny fironana sy ny.
Teo aloha:Ny fanaka plastika dia nanjary hery vaovao teo amin'ny sehatry ny fanaka
Manaraka:Inona no fantatrao momba ny mampiavaka ny kojakoja fanaka fanaka?